निर्मलाकै नियति भोग्नु नपरोस् भागरथीले पनि :निर्मला पन्तको जस्तै अ’परा धिले द’ण्ड नपाउने होकि ???? – News Nepali Dainik
निर्मलाकै नियति भोग्नु नपरोस् भागरथीले पनि :निर्मला पन्तको जस्तै अ’परा धिले द’ण्ड नपाउने होकि ????
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २८, २०७७ समय: १५:५४:२२
बैतडी । छोरी–चेलीले सुरक्षा महशुस गर्न नपाउँने ? कहिले सुरक्षित समाज बन्न सक्ला? बैतडीकी चेलीको ब’ला त्का’रपछि भएको ह,त्याले समाज र सरकार दुबैलाई पुनः एकपटक क’ठघरामा उभ्याएको छ। सुदूपश्चिम प्रदेशकै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको ब’ला त्का’रपछि ह,त्या गर्ने अ’परा धि २ वर्षसम्म पनि फेला पर्न सकेको छैन ।
यही नियति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ, भागरथी भट्टको ब’ला त्का’र पछिको ह,त्या अनुसन्धानमा! हुनत् प्रहरीले भागरथीको ब’ला त्का’रपछि ह,त्या अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गर्दै आएको छ । गत बुधबार वे’पत्ता भागरथीको बिहीबार क्षत वि क्षत अवस्थामा श,व फेला परेको थियो । त्यसयता, उनी निकट केही व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिएको छ ।
अनुसन्धानको ढोका साँ’घुरिएको प्रहरीले बताएको छ । तर, निर्मला पन्तको जस्तै अ’परा धिले द’ण्ड नपाउने होकि भन्ने सन्देह बाँकी छ । परिवार मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई प्रहरीसँग त्यति धेरै विश्वास छैन । सरकार मात्र होइन, समाज पनि दो’षी बन्दैछ । किन आपराधिक मनोवृत्तिले टाउको उठाउन पाइरहेका छन् ? निर्मलाले न्याय पाएको भए सायद, भागरथीले त्यस्तो नियति भोग्नुपर्ने थिएन कि ?
कुर्सीको खेल र राजनीतिक हानाथापमा सिंगो राज्य अलमलिएको छ । मानव अधिकारको सं’रक्षणमा कोही ग’म्भीर देखिदैनन् । छोरी–चेलीहरु त्रा’समा दैनिकी का’ट्न बाध्य छन् । घरबाट कतै काममा होस् वा विद्यालय जाँदा होस्, सकु शल फर्किने हो कि हैन चिन्ता थपिन्छ । हाम्रो समाज कता जाँदै छ ? आ’परा धिक मनोवृत्तिलाई कतै समाजले नै बढावा त दिंदैछैन ?
प्रहरी प्रशासन–सरकार गैर जिम्मेवार त बन्दैछैन ? यी प्रश्न हरेक नागरिकको मानसपटलमा उब्जिने गरेको छ । खासै विश्वास छैन । यहाँ पहुँचका भरमा अ’परा धि उम्काइन्छ । न्यायका दिलाउँन र समाजको मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न न तपाई न हामी न त सरकार नै ग’म्भीर छ । हो, आज अर्की चेलीले ब’ला त्का’रको शिकार हुनुपरेको छ ।
Last Updated on: February 10th, 2021 at 3:54 pm